September 14, 2020 623
धरानमा वि’वाह गरेको दुई महिनामै युव’तीको नि’धन भएको घटना’मा थप नयाँ कुरा बाहिर आएको छ । दुई महिना अघि मात्र एक जना सिंगापुरका लाहुरेसंग विवाह गरेकी धरा’नकी सुनी लिम्बु निध’न भएको अवस्था’मा फेला परेकी हुन् ।
छोरीले देह त्या’ग गरिन् भनेर माइतीलाई खबर गरेप’छि घरमा पुगेका माइ’तीका सदस्यले घ’टना संकास्पद रहेको बताएका छन् । ति युवतीको श्रीमान अहिले पनि सिं’गापुरमा छन् ।
दे’हत्या’ग गरेको बताइ’एको धरान ११ की २२ बर्षीया सोनी हाङ्मा लिम्बु’को घ’टनामा माइती पक्षले दिएको कि’टानी जा’हेरी पछि श्रीमा’नको बुवा ६१ वर्षीय भीम माबो, केटाको दुई दिदी २८ बर्षीया सन्जु माबो र २५ बर्षीया विमला माबो र केटाको भाई २० वर्षीय हेम’कुमार माबो’लाई प्रहरीले प’क्राउ गरेको छ ।
घट’ना कसरी भयो भन्ने अझै खुलेको छैन । श्री’मानको परिवारले दे’ह त्या’ग गरेको बताएका छन् भने माइती पक्षले शं’कास्पद भन्दै किटानी जाहेरी दिएका छन् ।
तर श्रीमानका भिनाजुले सोनीको अन्य युवकसंग पनि सम्ब’न्ध रहेको दावी गरेका छन् । विवाह अघि पनि एक जना युवकसंग सोनीको सम्बन्ध भएको र त्यो कुरा श्रीमा’नलाई पनि थाहा भएको उनले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘एक जनासंग सम्बन्ध थियो, सम्बन्धको कुरा पनि सालोलाई थाहा थियो । त्यो कुरा स्वीकार गरेको भएपनि त्यस’पछि फेरी अरु दुई युवक’संग पनि उनको सम्बन्ध रहेको श्रीमा’नले थाहा पाएको थियो । आफ्नो श्रीम’तीको यस्तो कुरा थाहा पछि कुन श्रीमा’नले ताली वजाउँछ होला ?’
आफ्नो अति’रिक्त सम्बन्धको बारेमा थाहा भएपछि इज्ज’तको डरले देह त्या’गको निर्णय गरेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । श्रीमानको नामवाट कोरिया’मा भएको एक जना उनकै पूर्व प्रे’मीले अ श्लि ल तस्बिर र भि’डियो माग्दा सोनीले पठाइदिएको र सोही घ’टना पछि पनि श्रीमान’संग मतभेद भएको उनको भनाई छ ।
श्रीमानको फेस’वुक लगइन गरेर उनका पूर्व प्रेमीले अ श्लि ल तस्बिर र भिडियो पठाउन सोनीलाई भनेका थिए । युवकका परिवारले घट’ना भएको बेलामा घरमा हुँदै नभएका’हरुको नाममा पनि किटा,नी जा’हेरी दिएको भन्दै अ’सन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सोनीको नि’धन हुँदा उनका दुई अमाजु घरमा थिएनन् । सोनीका माइती पक्षले उनीहरुको नाममा पनि किटा’नी जाहेरी दिएको भन्दै सोनीका श्रीमानका भिना’जुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रहरीले पो’ष्ट’मार्टम पछि मात्र घ’टना के भएको हो भनेर भन्न सकि’ने जनाएको छ ।
Prevमोटरबाइक जोगाउन खोज्दा विवाह’को ६ महिनामै पुछियो सिन्दुर..यस्तो दर्द-नाक घ’टना
Nextसिंगापुरे लाहुरेसंग विवाह गरेको २ महिनामै सोनीको मृ’त्यु: प्रेमिलाइ अ श्लि’ल फोटो पठाएको आरोप(भिडियो हेर्नुस्)
काठमाण्डौबाट मजदुर बोकेर दोलखा जाँदै गरेको बस दुर्घट’ना
अचम्मको घटना: जुवा खेलेको आरोपमा गधा पक्राउ !
आज साउन १ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
हामीले खाने नुन यसरी बन्दो रहेछ (हेर्नु’होस् यो भिडियो)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (65658)
भर्खर बिहे गरेकी स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (63460)
आँचलले लेखिन् आलोचकहरुलाई मन रुवाउने पत्र, पलको विषयमा यसो भनिन् (भिडियो) (52364)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (51682)
वीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्.. (51194)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (47063)
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित) (46809)
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमीसहित फेला परिन हराएकी लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (41679)
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचे’त रहनुहोला (39153)
बेवारिसे श’व भनेर फेवातालवाट बाहिर निकालेपछि कृष्णको उड्यो होस्, आफ्नै भाईलाई मृ’त देखेपछी (भिडियोसहित) (33999)
सुनमा के छ त्यस्तो? जसलाई जन्मदेखि मृ`त्यु संस्कारसम्म प्रयोग गरिन्छ, थाहा पाईराखौ
गरिब-दुखिहरुको लागि रवि लामिछानेले बनाएको रास्कोट अस्पताल आजदेखि सञ्चालनमा (भिडियो)